Shina Miaraka amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy PCBA takelaka | Chapman
✭ Ity dia ampahany plastika ampiasaina hanamboarana ny tabilao PCBA, mba hitazomana ny PCBA handanjalanja sy hiantohana ny fitoniana amin'ny fambara fampitana. Ny fepetra takiana amin'ity ampahany plastika ity dia avo dia avo, ary ny fahamendrehan'ny ampahany amin'ny vokatra plastika dia tsy maintsy ao anatin'ny 0,02mm. Noho izany, raha toa ka raikitra ny sehatry ny fifandraisana maro amin'ny PCBA, ny vokatra dia tsy azo atao zoro zoro, ary ny bobongolo dia tsy maintsy namboarina sy namboarina tamin'ny fomba Slider.
✭ Ny fitaovana PC mahatohitra maripana avo lenta ampiasaina amin'ity fitaovana plastika ity dia fitaovana ampiasaina matetika amin'ny jiro fiara. Ity fitaovana ity dia manana tombony amin'ny fiovana kely, fitoniana tsara, fanoherana ny hafanana avo ary fanoherana ny hatsiaka.
✭ Ity andiana bobongolo ity dia mandray ny fenitra HASCO. Ny akora fototra dia vy vy mafy 1.2343. Ny firafitry ny bobongolo dia rafitra sarotra, mila mampiasa insertable azo ampifamadihana amin'ny famokarana faritra efatra samy hafa. Ny akora vokatra dia PC, ary ny ilany tokony ho Poloney 600. Ny takiana amin'ny haben'ny vokatra dia +/- 0,02. 38 ora ny ora fanaterana bobongolo, ary 27 segondra ny tsingerin'ny tsindrona. Ny bobongolo dia nosedraina indroa fotsiny, ary nangataka anay ny mpanjifa handamina fanondranana any amin'ny orinasa famolavolana tsindrona Alemanina.
Bobongolo No. CPM-191018
Famaranana ambonin'ity Polish- # 600
Fitaovana plastika PC
Ampahany lanja 1,5 g
Rindrambaiko famolavolana ug
Part size 32,00 X 18,50 X 18,1 mm
Haben'ny bobongolo 296 X 346 X 326 mm
Anarana bobongolo Buffer amin'ny zoro
Rongony bobongolo 1 * 2 (Mampiasà fampidirana azo takalo mba hahazoana faritra efatra)
mpihazakazaka mpihazakazaka mangatsiaka ho an'ny vavahady Side
Bobongolo fitaovana 1,2343 / 1,2312 / 1,2767
Kitapom-bolan'ny fiainana 1,000,000
Fe-potoana 38 andro
Fotoana tsingerin'ny bobongolo: 27 ny
Ity ampahany amin'ny baoritra plastika ity dia ampiasaina matetika ho toy ny switch switch amin'ny rafitra fitetezana fiara. Ny akorandriaka switch dia tsy tokony hovaina endrika na ny fandeferana dia tsy fandeferana, ary ny fitaovana dia tsy maintsy may afo sy mahatohitra hafanana avo. Hamarino fa marin-toerana ny tabilao misy antsika ary tsy mora ny mihetsika ao anatiny.
Na inona na inona boaty manamboatra boaty, ny kalitaon'ny casing plastika dia tena tsara. Hanao ny fandalinana sy ny fanombanana mifototra amin'ny akorandriaka 3D omenao izahay. Ny ekipa teknikanay dia afaka manome serivisy hanatsarana vokatra. Amin'ny alàlan'ny famakafakana ara-teknika savaranonando dia azontsika atao ny miantoka fa ny daty sy ny kalitaon'ny fandefasana dia tonga lafatra ary vita tsara.
Mamorona lanja ho an'ny mpanjifa ary manao azy ho tonga lafatra dia ny filozofianay. Hahatsapa tombony bebe kokoa ianao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny CPM!
Izahay dia za-draharaha amin'ny karazana vy sy fittings amin'ny fenitra iraisam-pirenena
Fonosana & Warehousing
Previous: Sivana menaka ccessories plastika
Manaraka: Boaty plastika 7andro
Masinina POS carte de crédit amin'ny banky